Workplace by Facebook ဟာ ဘာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အနာဂတ် Communication…
Workplace by Facebook ဟာ ဘာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အနာဂတ် Communication တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ။
အခုလုပ်ငန်းတွေထဲမှာ ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်နေပါသလဲ?
ပုံမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင် Skype ၊ Viber ၊ WhatsApp တို့လို တစ်ကိုယ်ရည်သုံးဆက်သွယ် ရေးအယ်ပလီကေးရှင်းတွေ အသုံးပြုနေပါတယ်။ တချို့ကျတော့ အင်တာနက်စပေါ်ကတည်းက သုံးလာတဲ့ အီးမေးလ်ကို သုံးနေကြတုန်းပါပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူတိုင်းအကျွမ်းတဝင်ရှိတာ Viber ပါ။ Messenger, Skype, WhatsApp နဲ့ WeChat တို့လည်း သုံးကြပါတယ်။
ကုမ္ပဏီမှာ ဝန်ထမ်းတွေအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျရင် ဒီအယ်ပလီကေးရှင်းတွေကို သုံးရတာ အဆင် ပြေတော့မှာဟုတ်ပါဘူး။ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသုံးရတာမို့ ကိုယ်နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်တဲ့သူသာ ဖုန်းနံပါတ် (ဆင်းကဒ်) ပြောင်းသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆက်သွယ်ဖို့အခက်အခဲတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်လေ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရုံးကိစ္စတွေအတွက် Microsoft ရဲ့ Yammer ကိုသုံးခဲ့ဖူးသလို Slack လည်း သုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။ Slack ရဲ့ Messages ရှာဖွေနိုင်တဲ့ Feature က နှစ်သက်ဖို့ကောင်းပေမယ့် Messages စောင်ရေကိုတော့ တစ်သောင်း အထိပဲ ခွင့်ပြုထားတယ်။ ဆက်ပြီးသုံးချင်ရင် တစ်လကို ရှစ်ဒေါ်လာဆိုတာက ဈေးအရမ်းကြီးနေသလိုပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အင်တာနက်လိုင်းနဲ့ Slack ကို အသုံးပြုရတာက အရမ်းနှေးကွေးလွန်းပါတယ်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ရုံးထဲမှာအချင်းချင်း Email နဲ့ဆက်သွယ်တာတွေ တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားမယ် လို့ထင်ပါတယ်။ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်ကြီးမှာ နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေက အချင်းချင်းဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာ အဖိုးအခနည်းနည်းနဲ့ ပိုပြီးအလုပ်တွင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေလာကြမှာ အမှန်ပါပဲ။
နောက်ပိုင်း ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အလုပ်ခွင်မှာ အီးမေးလ်အသုံးပြုတာ တဖြည်းဖြည်းနည်းလာပြီး Internal Chat အယ်ပလီကေးရှင်းကိုပဲ ပိုပြီးသုံးဖြစ်ပါတော့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ အီးမေးလ်ကို ငါးမိနစ်တစ်ခါ လောက်စစ်ပြီး အချိန်ကုန်ခံနေမှာလဲ။ တခြားအကျိုးရှိမယ့် Project တွေမှာ အချိန်ပို သုံးမှာပေါ့။
Workplace by Facebook က ဘာပါလဲ။
Workplace by Facebook နဲ့ ကုမ္ပဏီတူ ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းဟာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်လို့ရသလို ဝန်ထမ်းတွေမှာ အကြံဉာဏ်ကောင်းရှိခဲ့ရင် Workplace ကနေတဆင့် ချက်ချင်းအသုံးချနိုင်အောင် တင်ပြလို့ရတယ်။ ဌာနအချင်းချင်းဆွေးနွေးနိုင်သလို၊ News Feed ကနေလည်း တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အကြံပေးမှုတွေကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အသံနဲ့ Video ခေါ်ဆိုမှုတွေ လုပ်နိုင်တာကြောင့် အလုပ်ပိုတွင်မှာ အမှန်ပါပဲ။
Workplace ရဲ့ အခရာအကျဆုံးတစ်ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Facebook အသုံးပြုနေကြလူဆိုရင် ဘာမှထပ်လေ့လာဖို့မလိုဘူး။ အသွင်အပြင်က မြင်နေကြပုံစုံမျိုးပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အသုံးအဝင်ဆုံး Features တွေကိုသာထည့်သွင်းပေးထားပြီး တခြားမလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုတော့ ဖြုတ်ထားပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က Workplace ဟာ ကျွန်တော်တို့ Personal အကောင့်နဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိသလို Set Up လုပ်ရတာလည်း အရမ်းလွယ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ Revo ကုမ္ပဏီဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Leading Digital Agency တစ်ခုအနေနဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပက နာမည်ကြီး Brand အမျိုးမျိုးကို ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့သလို အောင်မြင်မှုအများအပြား ရခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Workplace by Facebook ကို ပထမဆုံးစမ်းသပ်သုံးစွဲခွင့်ရခဲ့တဲ့ Agency ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ တော်တော်ကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ Product ကို Launch မလုပ်ခင် Beta Test ပရိုဂရမ် ကို နှစ်လလောက်ကြိုပြီး သုံးစွဲခွင့်ရလို့ပါ။
Workplace by Facebook အကြောင်းကို အကျဉ်းချုပ်ပြောပါဆိုရင် “လွယ်ကူချောမွေ့တယ်” လို့ပဲပြောပါရစေ။
Workplace by Facebook က Email နဲ့ကုန်ဆုံးနေရမယ့်အချိန်တွေကို လျော့နည်းစေပါမယ်။ Email ကိုအကောင်း ဆုံးဖြစ်အောင်စာစီရတာ၊ Email လိပ်စာတစ်ခုခြင်းစီရှာပြီးထည့်ရတာ၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကလူတွေကို Group Email ပို့ရတာမျိုးတွေ မလိုအပ်တော့ပါဘူး။ Workplace မှာ Status တစ်ခုတင်လိုက်ရုံနဲ့ အားလုံးအဆင် ပြေသွားပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ Workplace မှာ Emoji နဲ့ Comment Feature တွေပါတာမို့လို့ ဝန်ထမ်း အသီးသီးရဲ့ မှတ်ချက်တွေ၊ တုန့်ပြန်မှုတွေကို အလွယ်တကူသိနိုင်ပါတယ်။ ပရောဂျက်အလိုက် အဖွဲ့အချင်းချင်း လွယ်လွယ်ကူကူပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လို့လည်းရပါတယ်။
Facebook ရဲ့ Messenger လို Chat လို့ရနိုင်တာကတော့ တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ Feature တစ်ခုပါ။ (အိမ်မှာအေးဆေးနဲ့ အင်တာနက်သုံးနေရသလိုမျိုးပေါ့)။
ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်ထွက်သွားခဲ့ရင် သူတို့အကောင့်ကို အလွယ်တကူဖျက်ပစ်လို့ရသလို ဝန်ထမ်းအသစ်တွေ အတွက်လည်း အကောင့်အသစ်ဖွင့်ပေးလို့ရပါတယ်။ Workplace by Facebook ပေါ်က ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ Activity တွေကို အချိန်မရွေးကြည့်ရှုနိုင်သလို ဘယ်သူ Active အဖြစ်ဆုံးဆိုတာကိုလည်း ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ကုမ္ပဏီမှာ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ခရီးစဉ်တွေရှိခဲ့ရင် Workplace မှာ ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း ဓါတ်ပုံတွေဝေမျှလို့ရပါတယ်။
အလုပ်လုပ်နေရင်း ပျော်ရွှင်ဖွယ်အခိုက်အတန့်လေးတွေရှိခဲ့ရင်လည်း Workplace ပေါ်မှာ Post လုပ်လို့ရပါတယ်။ ပရောဂျက်တစ်ခုခုပြီးသွားတဲ့အခါမျိုးကျရင် ဒီသတင်းကို Workplace ပေါ်မှာ Share ပြီးတော့ ဂုဏ်ယူနိုင်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ယောက်ရာထူးတိုးသွားခဲ့ရင်လည်း Workplace ပေါ်ကနေအသိပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်က ဝန်ထမ်းတွေရဲ့တုန့်ပြန်မှုကိုချက်ချင်းသိနိုင်လို့ပါ။ တကယ်လို့ အီးမေးပို့ပြီး Announcement လုပ်မယ်ဆိုရင် ဝန်ထမ်းအနည်းငယ်ကသာ Reply ပြန်ပါမယ်။ နောက်ပြီး ဘယ်သူဖတ် တယ်၊ မဖတ်ဘူးဆိုတာ သေချာမသိနိုင်ပါဘူး။
Workplace ရဲ့ News Feed မှာတော့ Seen ဆိုတဲ့ Feature ပါလို့ ဘာအခက်အခဲမှမရှိတော့ပါဘူး။ ကုမ္ပဏီအတွင်းမှာ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေအတွက် အလှူငွေကောက်ခံဖို့ အကောင်းဆုံး Tool တစ်ခုဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကုမ္ပဏီက ဝန်ထမ်းတစ်ဦးရဲ့အမေ ဈာပနအခမ်းအနားအတွက် Workplace ကနေ အကူငွေကောက်တာ ဒေါ်လာ တစ်ထောင်အထိရခဲ့ပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်တာနဲ့ Workplace နဲ့ ဝန်ထမ်းအချင်း ချင်းကြားမှာ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကို ဘယ်လောက်အထိ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာ အထင်းသားတွေ့ ရမှာပါ။
Workplace by Facebook အသုံးပြုနေကြတဲ့ akhayar.com အဖွဲ့သားများ
ကျွန်တော်တို့ Revo မှာ Department နှစ်ခုရှိပါတယ်။ Social Media Agency နဲ့ Akhyar Content Platform ဆိုတဲ့နှစ် ခုပါ။ လူငယ်ပရိသတ်တွေအတွက် Akhayar ကနေပြီး Lifestyle ၊ Tech ၊ Food တို့နဲ့ပက်သက်တဲ့အကြောင်းအရာ တွေကို နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတာကို ဖတ်ဖူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုတင်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် အခရာအဖွဲ့သားတွေက Workplace ကို အဓိကထားပြီး အသုံးပြုကြတာပါ။ ပရိသတ်တွေအတွက် နောက်တစ်ပတ်မှာဖော်ပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို Worplace က Akhayar Group မှာ Post တွေတင် ပြီး ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ Comment တွေပေးပြီး ပိုကောင်းတဲ့ Idea တွေရဖို့ ကြိုးစားကြတာပေါ့။ Event တွေ သွားရမှာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ခြင်းကို တာဝန်တစ်ခုစီပေးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် Akhayar Group ထဲမှာ Tag တွဲပြီးကြေငြာပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ Group Chat နဲ့အဖွဲ့သားအချင်းချင်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်သလို အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်စုံတစ်ခုရှိခဲ့ရင် ချက်ချင်းသိနိုင်တာကလည်း Workplace ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုပါ။ အခုဆို ရင် Workplace ကြောင့် Akhayar ရဲ့ရုံးတွင်းလုပ်ငန်းတွေဟာ အရမ်းကိုအဆင်ပြေချောမွေ့နေပါတယ်။
• Facebook ကို ပုံမှန်အသုံးပြုနေကြတဲ့သူတွေအတွက် Workplace ကိုအသုံးပြုဖို့ အခက်အခဲမရှိပါဘူး။ (မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ Facebook မသုံးတဲ့သူ ခပ်ရှားရှားပါ။)
. Facebook ကို ပုံမှန်လူတွေသုံးတာလို့ ပြောမယ်ဆိုရင် Workplace က စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ သုံးဖို့ပါ။
(Facebook နဲ့ Workplace by Facebook က User Interface တွေ အတူတူပါပဲ။)
• မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အင်တာနက်လိုင်းနဲ့ အခြားအယ်ပလီကေးရှင်း (ဥပမာ — Slack) တို့ိကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် တော်တော်ကြီးနှေးပါတယ်။ Workplace by Facebook ကတော့လုံးဝကို မြန်ပါတယ်။
• Workplace အကောင့်က ပုံမှန် Facebook အကောင့်နဲ့မသက်ဆိုင်ပဲ အလုပ်ခွင်မှာသုံးဖို့သီးသန့်ဖြစ်တဲ့အတွက် ရုံးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါတယ်။
• Workplace ဟာ ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း အလုပ်ခွင်မှာ အကောင်းမွန်ဆုံးဆက်သွယ်နိုင်တဲ့အယ်ပလီ ကေးရှင်းတစ်ခုပါ။
သင့်ရဲ့ကုမ္ပဏီအတွက် Facebook ရဲ့ Workplace ကိုအသုံးပြုဖို့စိတ်ဝင်စားနေပြီဆိုရင်တော့ (mk@revotech.co) ကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံး Workplace by Facebook ကိုသုံးစွဲခဲ့ (သုံးစွဲနေဆဲ) ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကို အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
CEO of REVO